शालिकरामको भिडियो किशोर श्रेष्ठ आफैँले खिचेको ज्ञानेन्द्र शाहीको आशंका!::News from Nepal
चर्चित संचारकर्मी रवि लामीछाने अहिले चितवन प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । लामिछाने पक्राउ परे सँगै देश यहि विषयको बहसमा केन्द्रित रहेको छ । रविको समर्थन र विरोधमा व्यापक विवेचना भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष समेत रहेका जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ मार्फत पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको भिडियो सुसाइट नोट सार्वजनिक भए लगत्तै प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीसँग सुरक्षित रहेको भनिएको भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने बिषयमा गम्भिर आशंका सहित प्रश्न गरिएको छ । भिडियो सार्वजनिक गर्ने श्रेष्ठले आफुलाई पुडासैनीको परिवार स्रोतले उपलब्ध गराएको दावी गरेका छन् । तर रवीका समर्थकहरुकले रवीलाई फसाउँनका लागी षड्यन्त्रपूर्वक भिडियो सार्वजनिक गरिएको दावी गरेका छन् ।
यसैविच आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी अधियान्ताका रुपमा अभियान संचालन गरिरहेका ज्ञानेन्द्र शाहीले भिडियो रविलाई फसाउँनैका लागी पूर्वाग्रही ढंगले सार्वजनिक गरिएको दावी गरेका छन् । प्रहरीले सिल गरेको अवस्थामा मोवाइलको भिडियो किशोर श्रेष्ठको हातमा कसरी पुग्यो? भन्दै शाहीले यसमा गम्भिर षड्यन्त्र रहको ठोकुवा गरेका छन् । सरकार रविलाई जेल हाल्न घुँडा धसेर लागेको भन्दै उनले न्याय मर्न नदिन जति सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताए ।
ओटीभी नेपाल डट कमको ओटीभी विशेष संवादमा कुराकानी गर्दै शाहीले पत्रकार किशोर श्रेष्ठ माथि केहि गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले कतै शालिकरामको भिडियो श्रेष्ठ आफैँले खिचेका त हैनन ? भन्ने आशंका समेत गरेका छन् । मिलेमतोमै रविलाई फसाउँने डिजाइन भएको भन्दै शाहीले अनुसन्धान भिडियो लिक गर्ने लाई पनि गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
अभियान्ता शाहीले रवि लामिछाने प्रकरणमा विभिन्न भित्रिकुराहरु खुलासा गरेका छन् । हेर्नुहोस् ओटीभी नेपालका लागी ज्ञानेन्द्र शाही सँग शिवशक्ति आचार्यले गरेको भिडियो कुराकानी